गुप्त विनिमय कसरी सिर्जना गर्ने - Blockchain समाचार
हामी तपाईंको ध्यान गर्न गुप्त विनिमय को संस्थापक र सीईओ संग एक साक्षात्कार प्रस्तुत btc-alpha.com Vitali Bodnar, स्क्राच देखि गुप्त विनिमय कसरी बनाउन.
को Cryptocurrency बारेमा कसरी थाहा थिएन?
शिक्षा मेरो विशेषज्ञता – भौतिक, कम्प्युटर विज्ञान, कम्प्युटर प्रविधिको, म निरन्तर विकास मा लगे थियो. तरिका म गल्ति Bitcoin बारेमा मंच मा पढ्न र दिन बुझ्न थाले, कसरी काम गर्छ बारेमा सबै कुरा पढ्न.
यस गुप्त उद्योग मा तपाईं कसरी प्राप्त गर्नुभयो?
यो सबै म खानी मा रहेको छ कसरी सोच थियो भन्ने तथ्यलाई सुरु. प्रक्रिया बारे सोचिरहनुभएको पछि, त्यहाँ अर्को समस्या थियो – म minted कि सिक्का के के. म आदानप्रदान गर्न पैसा लिए, जो, खैर, त्यसपछि साह्रै काम थियो. त्यसैले म सजिलै व्यापार गर्न सरेका.
तपाईं एक गुप्त विनिमय सिर्जना गर्न आवश्यक छ भनेर तपाईं किन निर्णय गर्नुभयो?
यो मेरो पहिलो विफलता कारण छ. म, कुनै पनि राम्रो व्यापारी जस्तै, म उल्लङ्घन छैन भनेर नियम को एक सेट छ: म अग्रिम योजना स्थिति बाट निस्कनुहोस् बिन्दु, जब म तनाव अन्तर्गत छु म काम छैन, म minuses समाधान गर्न प्रयास, मलाई प्रतीक्षा गर्न को लागि यो सजिलो, म माइनस लागिरहेको छु मैले त्यो दिन मा क्षतिपूर्ति छैन, मैले मेरा ल्यापटप बन्द र काम छैन. मेरो विफलता तनाव कारण भयो, र त्यो क्षण मा म अन्य सबै नियम भङ्ग. म नकारात्मक सम्झौता गए, नकारात्मक मा बन्द, क्षतिपूर्ति निर्णय. एक दिन को लागि, म सञ्चालन 10 यो परिदृश्य संग सञ्चालन. म डलर हजारौं केही दसौं गुमाए, जो म एक धेरै लामो समय कमाएका.
यो विनिमय सिर्जना कसरी असर गर्नुभयो?
म परिस्थिति विश्लेषण गर्न थाले र एक व्यापारी कमाउन सक्नुहुन्छ भनेर बुझे, वा पैसा गुमाउनु. तर विनिमय सधैं एक पुरस्कार रहिरहन्छ. म यो सबै एकदम रोचक छ भनेर बुझे र म मेरो आफ्नै गुप्त विनिमय सिर्जना गर्न चाहनुहुन्छ कि.
गरेको गर्छन5तपाईंको आफ्नै गुप्त विनिमय सिर्जना गर्न कदम.
मेरो लागि, पहिलो कुरा हो “उत्पादन संग बाल्न।” मेरा सबै मित्रहरुलाई, परिचितहरू, अपरिचित, म गुप्त विनिमय विकास भएको थियो कि सबैलाई भन्नुभयो र म एक टोली आवश्यक, मान्छे, पैसा, र सबैलाई यो काम छैन भनेर भन्नुभयो, तर म एक पागल विश्वास थियो. यो सबै लगभग थियो 2014-2015.
म विकास परियोजनाका लागि एक सकारात्मक प्रतिष्ठा नभएकोले, मान्छे तुरुन्तै गर्ने cryptocurrency छैन विश्वास देखा, यस गुप्त विनिमय छैन, तर मलाई एक विकासकर्ताको रूपमा गर्ने एक उत्पादन सिर्जना गर्न सक्नुहुन्छ.
सुरुमा, म Cryptoexchange एक तयार बनाएको आधार लिन सकिन्छ कि विचार थियो, यो एक सानो परिमार्जन गर्न, र यो काम गर्नेछ. onlineshop लागि मञ्चहरूमा संग रूपमा. तर यस्तो उत्पादन अवस्थित छैन. विषय मा Deepening, म स्क्राच सबै कुरा लेख्न चाहन्छु र विस्तार सबै बुझ्न भनेर बुझे.
सारा व्यापार मोडेल गणना. त्यतिबेला हामी bitcoinwisdom प्रयोग – पहिलो स्रोतहरूको एक तिमी बजार सार्दा कसरी देख्न सक्थे जहाँ, र एक दिन को लागि सबै विश्लेषण, एक महिना, र मात्रा हेर्न. उदाहरणका लागि, एक दिन आयोजित मा सञ्चालनका लागि विनिमय 5000 एक ससर्त विनिमय दर मा bitcoins $ 500. विनिमय आयोग – 0.4%. 500 ले गुणन छ 5000 र द्वारा 0.4 र हामी प्रति दिन एक सम्भावित लाभ प्राप्त.
त्यसैले, आदानप्रदान लागि व्यापार मोडेल एकदम सरल छ?
हो, म केही कुरा धेरै जटिल छ भने त्यो विश्वास, त्यसपछि यो काम गर्ने छैनन्, मात्र सरल कुराहरू काम.
प्राविधिक विनिर्देशों को तयारी. म सिर्जना प्रारम्भिक प्राविधिक जिम्मेवारी र प्राप्त परिणाम मौलिक अलग कुरा हो भनेर भन्न पर्छ, म विवरण को एक धेरै ठूलो संख्या बुझेनन् कि कारणले, मलाई एकदमै महत्त्वपूर्ण देखिन्छ कि केही क्षण महत्वपूर्ण सबै थिए, र विपरीत. यो एक मानक कथा छ.
थप विवरण मलाई भन्नुहोस्, तपाईं टीएस कसरी गरे? जहाँ उनले जानकारी प्राप्त गर्नुभयो?
त्यो समयमा, म धेरै आदानप्रदान मा कारोबार र DDoS आक्रमण कसरी उत्पन्न देखे, आदानप्रदान दिवालिया गए कसरी देखे, जब प्रयोगकर्ताहरूले विनिमय वफादार थिए देखे, र जब तिनीहरूले गरे, र किन यो भयो. म मेरो अनुभव देखि सन्दर्भको सर्तहरू मस्यौदा तैयार, म एक व्यापारी सहज हुनेछ रूपमा जसमा एक उत्पादन गरे. म बुझ्ने सबै सञ्चालन चाहन्थे. म एक इन्टरफेस सिर्जना गर्न कार्यक्रम प्रयोग, म कहाँ आकर्षित 25 भविष्यमा साइट पृष्ठ र यसको तर्क निर्माण. यसबाहेक, सबै Cryptoexchanges मूलतः एउटै हो.
कसरी अक्सर तपाईं तयार बनाएको प्राविधिक समाधान प्रयोग गर्नुभयो?
म प्राप्त Bitcoin blockchain.info पठाउन प्रयोग गर्न चाहन्थे. त्यो समयमा, तिनीहरूले एक सार्वजनिक एपीआई प्रदान. प्रारम्भिक चरण मा, यो न्यूनतम खर्च संग सर्वोत्तम उत्पादन प्राप्त गर्न पर्याप्त थियो कि मलाई यो देखिन्थ्यो, र सुधार र प्रत्येक वस्तु सुधार गर्न त बस. तर तिनीहरूले हामीलाई अस्वीकार, कारण व्याख्या बिना. म यो भयो कि सबैभन्दा सफल असफलता हो लाग्छ. हामी काम कसरी Bitcoin बाहिर आंकडा निर्णय, र हाम्रो ग्राहक स्क्राच पूर्णतया लेखे, जो अब निरन्तर सुधार छ. छ, हामी हाम्रो Bitcoin वालेट छ.
यो टोली छ. म पहिले नै राम्ररी समन्वित टोली थियो, जसलाई हामी दुई परियोजनाहरुमा काम. तर म हामी cryptosphere मा एक गुणवत्ता उत्पादन सिर्जना गर्न पर्याप्त अनुभव छैन भनेर बुझे. त्यसैले, हामी थप कार्यहरू हाम्रो ज्ञान पंप निर्णय, उदाहरणका लागि, भाग DDos-आक्रमणबाट सुरक्षा को विकास मा, पैसा प्राप्त लागि सेवाहरू, र यति मा. तीन वर्षसम्म हामी प्राविधिक जिम्मेवारी र समानान्तर काम – तेस्रो-पक्ष परियोजनाहरू कसरी सबै काम बुझ्न. यो धन्यवाद, हामी पनि हाम्रो परियोजना थप गर्न मदत गर्ने विशेषज्ञहरु थाह भयो.
सबैभन्दा banal पैसा छ. सुरुमा, म लगभग सङ्कलन गर्न सक्षम थियो $ 300,000. यो प्रोग्रामर को टीम को वर्ष छ, न्यूनतम लागत, तर कानुनी सेवा सन्दर्भमा बिना. तर यो थियो 2013. अब, मलाई लाग्छ, एक न्यूनतम $ 1 लाख आवश्यक छ. हामी फरक प्रतिस्पर्धी वातावरण र अन्य अवस्थामा सुरु, त्यसपछि मात्र थिए5एक्सचेन्जहरू, र अब त्यहाँ तिनीहरूलाई सयौं छन्.
तपाईंको प्रयोगकर्ता को भूस्थान के हो?
सारा संसार, तर हामी अहिले किनभने कानुनी मुद्दा को अमेरिका देखि दर्ता निषेध.
कति कर्मचारीहरु सुरक्षा संलग्न छन्?
यदि एउटा जरुरी कार्य छ, त्यसपछि सम्पूर्ण टोलीले मा लगी भएको छ, र कुनै कुरा कुन समयमा यो भयो.
त्यहाँ संवेदनशीलता फेला लागि इनाम छ? र के?
अर्को दिन, जालसाजी ई-मेल प्रशासक को संभावना फेला लागि भुक्तानी इनाम. वास्तबमा, तिनीहरूले वास्तवमा यो लागू गर्न सकिएन, तर यो समस्याका फाइदा लिन सैद्धांतिक सम्भव थियो.
र कति उनीहरूले भुक्तानी गरे?
केही सय, एउटा सानो रकम, पछि यो एक महत्वपूर्ण समस्याका छैन. हामी ती वा अन्य संवेदनशीलता फेला लागि लागत सूची छ.
आफ्नो मुद्रा मा मुख्य व्यापार जोडी के हुन्?
BTC / USD, LTC / USD, BTC / मुद्रा, बीटी / Zcash.
कसरी म आफ्नो मुद्रा मा मेरो टोकन गर्न सक्नुहुन्छ?
हामी सिक्का थप्दा लागि एक खण्ड छ, र यो स्पष्ट हामी थप्न सक्नुहुन्छ जसले जो गर्दैन संकेत.
को आकर्षक साक्षात्कार को लागि धन्यवाद
को द्वारा तयार CryptoRadio टोली
Bitcoin गर्न $1 Million By 2020 ...
अघिल्लो पोस्ट:Blockchain परियोजना DFINITY Stiftung $ 61M उठ्छ
अर्को पोस्ट:क्यानाडा गुप्त विनिमय Coinsquare $ 30M उठ्छ
Rosia Bence भन्छन्:
फेब्रुअरी 12, 2018 मा 5:28 AM
make money on youtube views भन्छन्:
फेब्रुअरी 12, 2018 मा 2:51 PM
New Cryptocurrency Giving Away Free Coins भन्छन्:
मार्च 1, 2018 मा 9:58 AM